Renode: waa maxay qaabkani maxaad u daryeeshaa? | Qalabka bilaashka ah
Renode: waa maxay qaabkani maxaad u daryeeshaa?
Isaac | | Arduino, General, Raspberry Pi
Dib -u -habeyn Waa mashruuc dhowaan aan dad badani aqoon, laakiin taasi waxay xiiso u yeelan kartaa kuwa sameeya, hiwaayadda sameeya noocyadooda Arduino o Raspberry Pi, iyo horumariyeyaasha abuuraya mashaariicda IoT iyo nidaamyada ku duugan. Sababtaas awgeed, waxay leedahay taageero aad iyo aad u badan, casharro iyo waxyaabaha ku jira shabakadda.
Si aad waxbadan uga ogaato xiisahaas mashruuc furan, waxaad ku akhrisan kartaa maqaalkan waxyaabaha muhiimka u ah inaad isaga ogaato oo aad bilowdo inaad kala shaqeyso mashaariicdaada mustaqbalka ...
1 Waa maxay qaab-dhismeedku?
2 Waa maxay Renode?
2.1 Dhufto ee ay taageerayaan
2.2 Ku rakib Renode talaabo talaabo ah Linux
2.3 Orod Renode markii ugu horeysay iyo talaabooyinka ugu horeeya
2.4 Cusbooneysii casharrada
Waa maxay qaab-dhismeedku?
Dib -u -habeyn waa qaab, sida kuwa kale oo badan. Kuwa aan weli garanayn waxa ay taasi tahay, waa in la ogaadaa in qaabdhismeedku yahay jaangooyo jaangooyo ah oo lagu tiirsanaan karo ujeedooyin kala duwan, ujeedkuna yahay in waqtiga la badbaadiyo, sida horumarka, xallinta dhibaatooyinka, ku daridda taageerada barnaamijyada, maktabadaha, qalabka, iwm.
Waa maxay Renode?
Marka laga hadlayo Renode, waa qaab-dhismeed taas oo u oggolaaneysa dardargelinta horumarinta nidaamyada isku dhafan iyo IoT, oo u oggolaanaya in loo ekeysiiyo nidaamyada qalabka jirka, oo ay ku jiraan CPU-yada, qalabka I / O, dareemayaasha, iyo walxaha kale ee deegaanka. Sidaa darteed, waxay kuu oggolaaneysaa inaad socodsiiso, dib u dhigto oo aad tijaabiso softiweer horumaray adigoon wax ka beddelin kombuyuutarkaaga ama isticmaalin aalado kale.
Sida for taarikada la taageerayleeyahay tiro badan oo iyaga ka mid ah. Kuwaas waxaa ka mid ah Xilinx, ST Micro, Microchip PolarFire, SiFive, iwm.
Sidoo kale waa inaad ogaataa in Renode uu yahay a mashruuc furan, inkasta oo ay la socoto taageerada ganacsi ee Antmicro. Intaa waxaa dheer, waxay u oggolaaneysaa in loo ekeysiiyo qalabka Arm iyo RISC-V, taas oo u oggolaaneysa horumar deg deg ah iyo taageero loogu talagalay horumarinta barnaamijyada ka shaqeeya adduunka IoT.
Renode waa mid aad u dhameystiran, awood leh oo shaqeynaya. Si aad u badan, in kooxda TensorFlow Lite lafteeda ay u adeegsato si ay u dardargeliso horumarka iswada Qalabka Arm iyo RISC-V, iyo sidoo kale x86, SPARC, iyo PowerPC. Looma baahna in la helo qalab jireed oo ka mid ah barnaamijyadan tijaabada ah.
Macluumaad dheeraad ah - Bogga rasmiga ah ee mashruuca Renode.io
Dhufto ee ay taageerayaan
Sida for dhufto ee la taageeray qaabka Renode, oo aad ka shaqeyn karto, waa:
GNU / Linux (waxaa laga heli karaa Xirmooyinka DEB iyo RPM iyo sidoo kale .pkg.tar.xz ee Arch)
Sidoo kale waxaa lagu isticmaali karaa weelka Docker
Miisaan-caqli-gal ah, waa dhowr tobanaan MB, markaa ma ahan xirmo culus.
Ku rakib Renode talaabo talaabo ah Linux
Qaadashada Ubuntu distro tixraac ahaan, rakibi Renode Way fududahay sida soo socota ee talaabooyinkan:
Ku tiirsanaanta ku-tiirsanaanta, sida tan Mono:
Intaa kadib, waa inaad qancisaa ku tiirsanaanta kale:
Hadda, marin u hel tan web iyo soo dejiso el Xirmada DEB.
Waxyaabaha soo socdaa waxay noqon doonaan inaad tagto buugga 'Downloads directory' oo aad ka soo degsatay .deb oo rakib (Xusuusnow inaad ku bedesho magaca nooca kuu dhigma):
Orod Renode markii ugu horeysay iyo talaabooyinka ugu horeeya
Hada waad awoodaa ordi Renode markii ugu horeysay oo ka bilow mashaariicdaadii ugu horeysay. Wixii fulinteeda ah, waa inaad fulisaa amarka:
Tani waxay fureysaa a daaqadda shaqada laga bilaabo Renode halkaas oo aad ka geli karto amarrada si aad u abuurto mashiinka ugu horreeya ama aad u maamusho. Tusaale ahaan, si loo abuuro mashiin si loogu ekeysiiyo guddiga STM32F4Discovery:
Sidoo kale waad sameyn kartaa eeg duruufaha waxaa laga heli karaa madal leh:
By habka, mashiinka-0 waxay noqon doontaa magaca mashiinka caadiga ah haddii aadan mid kale dooran. Waxay u muuqan doontaa "deg deg" markii aad abuurto mashiinka ...
para rar barnaamijka waxaad dooneysaa inaad ku ordo mashiinkan jilitaanka ah si aad u tijaabiso, waad isticmaali kartaa (tusaale: kan Antmicro):
Sidoo kale waad kari kartaa ka soo rar cinwaanka deegaanka, tusaale ahaan, ka fikir inaad rabto inaad rarto barnaamij aad ku jirto:
Waad arki kartaa dhammaan amarrada aad isticmaali karto oo ku caawin kara haddii aad amarka isticmaasho I caawi gudahood deegaanka Renode.
Markaas waad awoodaa ku dayashada bilow:
O iyada joojiya leh:
Waxaan rajeynayaa inay wax kuu taray adiga…
In kasta oo aanu aad u soo noqnoqon, haddana waxaa jira in badan iyo ka badan Casharrada iyo degellada aad kala tashan karto macluumaadka ku saabsan isticmaalka Renode. Intaa waxaa dheer, bogga rasmiga ah laftiisa wuxuu leeyahay qayb ka mid ah fiidiyowyada casharrada kaas oo lagu barto aasaasiga si loo bilaabo mashaariicdaada.
Eeg dukumiintiyada iyo wiki
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » General » Renode: waa maxay qaabkani maxaad u daryeeshaa?
Hologram-ka guriga lagu sameeyo: sida loo sameeyo matalaadan shaxan
Naqshadaynta PCB: sida loo sameeyo iyo qalabka software-ka